ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲစွဲသောငယ်ရွယ်သည့်ဘာသာရပ်များအတွက်မကြာသေးမီကနှုတ်ဖြင့်မှတ်ဉာဏ် (2019) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Volume ကို 2019, အပိုဒ် ID ကို 2351638,5စာမကျြနှာ
Pukovisa Prawiroharjo, 1 Hainah Ellydar,2ပတေရုသ Pratama,3Rizki Edmi အက်ဒီဆင်,4Sitti Evangeline Imelda Suaidy,2ည '' Zata Amani,2နှင့် Diavitri Carissima2
1Neurology ဦးစီးဌာန, ဆေးပညာ Universitas အင်ဒိုနီးရှား / Cipto Mangukusumo ဆေးရုံ, ဂျကာတာ, အင်ဒိုနီးရှားဌာန
2Yayasan Kita ဒန် Buah Hati, Bekasi, အင်ဒိုနီးရှား
3Independent ပညာရှင်, အင်ဒိုနီးရှား
Muhammadiyah ပါမောက္ခဒေါက်တာ HAMKA, ဂျကာတာ, အင်ဒိုနီးရှား၏ 4Neuroscience Center က-တက္ကသိုလ်
စာပေးစာယူ Pukovisa Prawiroharjo မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်, [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ပညာရေးဆိုင်ရာအယ်ဒီတာ: Changiz Geula
ကျနော်တို့ညစ်ညမ်း-စွဲနှင့် Non-စွဲ Juvenile အကြားမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်အတွက်ကွဲပြားမှုကိုရှာဖွေရည်ရွယ်။ ကျနော်တို့ 30 Juvenile (12-16 y) သည် 15 ညစ်ညမ်းစွဲနှင့် 15 nonaddiction ဘာသာရပ်များပါဝင်သည်ဟုစာရင်းသွင်း။ ကျနော်တို့ Trail အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့စမ်းသပ်တစ်ဦးကပြုလုပ်ခြင်းနှင့် B (TMT-A နှင့် TMT-B) မှအတူအမြင်အာရုံမှတ်ဉာဏ်အဘို့နှုတ်မှတ်ဉာဏ်, Rey-Osterrieth Complex ပုံစမ်းသပ်ခြင်း (ROCFT) တိုင်းတာရန် Rey အာရုံနှုတ်ဖြင့်သင်ယူစမ်းသပ် (RAVLT) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်မရ ROCFT သို့မဟုတ်အာရုံကိုစမ်းသပ်မှုများတွင်: ကျနော်တို့စွဲအုပ်စုသည် (6 ± 13.47 vs 2.00 ± 11.67, MD = -2.44, စွဲ vs Non-စွဲ) ၏ RAVLT A1.80 ရလဒ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လိင်လူမျိုးကွဲအတွက် analysis မျှလိင်-တိကျတဲ့ခြားနားချက်လြှော့။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းစွဲမသက်ဆိုင်လိင်နှင့်အာရုံစိုက်မှုမှအသင်းအဖွဲ့ခြင်းမရှိဘဲ, Juvenile အတွက်ချို့ယွင်းမကြာသေးမီနှုတ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲကတည်းကရှည်လျား  အထူးသဖြင့် prefrontal cortex အတွက်ဦးနှောက် circuitry အပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်အမျိုးမျိုးသောသိမြင်မှုနှင့်အမူအကျင့်မမှန်, စေလူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အပြုအမူစှဲကိုလည်းဦးနှောက်  အပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွင်သည် Diagnostic နှင့်5အတွက်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါပဉ္စမ Edition ကို (DSM-2013) ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်အရာရှိတဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအဖြစ်လောင်းကစားရောဂါအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နောက်ထပ်လေ့လာမှုအဘို့အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါ [2, 3] စဉ်းစားထားသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းစွဲသုတေသနနှင့်အပြစ်ရှာဂုဏ် ဖျက်. ကျန်ရစ်ချို့တဲ့အဖြစ်ယူဆခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်သူတို့နည်းပညာနှင့်အင်တာနက်နှင့်ထိတွေ့နေကြအတိုင်းဤခေတ်သစ်ကာလ၌ Juvenile အကြားတွင်ပိုပြီးပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်လာသည်။ Yayasan Kita ဒန် Buah Hati ဂျကာတာနှင့်၎င်း၏ဝန်းကျင်ရှိဧရိယာ၌စတုတ္ထမှဆဋ္ဌမတန်းမူလတန်းကျောင်းကျောင်းသားနီးပါး 97% မီဒီယာ  ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများကနေညစ်ညမ်း contents တွေကိုထိတွေ့ခဲ့ကြပြီ။ တှေ့ရှိ ဒါဟာသိသိသာသာအလားအလာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုပြောင်းလဲရန်, အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-related လှုပ်ရှားမှုမှ၎င်းတို့၏လူမှုရေးအပြုအမူကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်ပေါ်စေမည်။ အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်း (ဥပမာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း [2, 5] နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း [6-7]) ကဲ့သို့ဤအလှည့်အတွက်, ချို့ယွင်းသိမြင် functions များ, ဆိုလိုသည်မှာအာရုံစူးစိုက်မှု, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး  နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် အဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲသူ့ဟာသူ [5, 11-15] ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရဲ့အကောင်းဆုံးစေရန်, ညစ်ညမ်းစွဲနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးယခင်လေ့လာမှုများအရွယ်ရောက်ပြီးသူဘာသာရပ်များအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ကျနော်တို့ကအများဆုံးအားနည်းချက်နေသောသူတို့ကိုအပေါ်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်သိမြင်မှု function ကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာဖို့လည်းလိုအပ်ယုံကြည်: Juvenile, ကဦးနှောက်ရငျ့၏အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုသည်နှင့်စွဲ [16, 17] အရှိဆုံးအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းက။ ညစ်ညမ်း-စွဲနှင့် nonaddicted Juvenile အကြားမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာပြီးမှရည်ရွယ်ဒီလေ့လာမှုက။
30 လူငယ်ဘာသာရပ်များ (အသက် 12-16 က y) ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း Yayasan Kita ဒန် Buah Hati အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲစမ်းသပ်ခြင်းကို အသုံးပြု. ပြသခဲ့ကြသည်) ((ညစ်ညမ်းစွဲအုပ်စုတစ်စုသို့သူတို့ကိုငါခွဲဝေချထားပေးရန်မှ (အောက်တွင်ကရှင်းပြခဲ့သည်)) နှင့် nonaddiction အုပ်စုသည်။ ညစ်ညမ်းစွဲ 32 ထက်တန်းတူသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်စမ်းသပ်မှုရမှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ကျောင်းအပ် Bekasi, အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ YKBH အားဖြင့်ကျင်းပသည့်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်များအတွက်, ဒီဇင်ဘာလ 2017-ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 စဉ်အတွင်းပြုလေ၏။ ဖယ်စံ, လက်-left နှုတ်သို့မဟုတ်ဘာသာစကားရောဂါ, ဦးနှောက်-related ရောဂါသို့မဟုတ်ရောဂါသမိုင်း, ဦးခေါင်းစိတ်ဒဏ်ရာ, ကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ်မွေးဖွား, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်အာရုံကြောရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ရောဂါကာလအတွင်းစိတ်ဒဏ်ရာခဲ့ကြသည်။
2.2 ။ ညစ်ညမ်းစွဲစစ်ဆေးခြင်း
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းစွဲခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်သောစိတ်ပညာရှင်များတီထွင်ခဲ့သောကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်မေးခွန်းလွှာကိုသုံးခဲ့သည်။ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများနှင့်စာပေသုတေသနအပေါ် အခြေခံ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုများသောလူငယ်များတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အညွှန်းကိန်းများစွာကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဤအညွှန်းကိန်းများကိုရှုထောင့်သုံးခုခွဲခြားနိုင်သည် - (၁) လွန်ခဲ့သောခြောက်လကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုသောအချိန်၊ အကြိမ်အရေအတွက်၊ အကြိမ်အရေအတွက်နှင့်ကြာချိန်တို့ကိုသတ်မှတ်သည်။ (၂) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ လိင်စိတ်စူးစမ်းခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှောင်ရှားခြင်း၊ (၃) ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ စိတ်သောကရောက်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၊ အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ မေးခွန်းလွှာတွင် ၉၂ ခုပါ ၀ င်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားရှိ ၆ တန်းမှ ၁၀ တန်းကျောင်းသား ၇၄၀ ကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအတုဖြစ်နိုင်ခြေကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်နောက်ထပ်မေးခွန်း ၃ ခုရှိခဲ့သည်။ လူမှုရေးဆန္ဒအရဤအဖြေကိုသူဘာသာရပ်များဖယ်ထုတ်ထားပါလိမ့်မည်။ Psychometric ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရပစ္စည်းအားလုံးတရားဝင် (CFA> 1) နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်း (Cronbach ၏ alpha> 2) ပြသခဲ့သည်။ အပြာစာပေစွဲကြည့်ခြင်းကို ၃၂ နှင့်အထက်သို့မဟုတ်အလေးချိန်ရှိသောအမှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အဆိုပါမေးခွန်းလွှာအထူးညစ်ညမ်းများ၏အခြေအနေတွင်လူငယ်လူဦးရေဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အဆင်ပြေအောင်ခဲ့သည်; ထို့ကွောငျ့, ဒီလေ့လာမှုအတွက်အလွန်သင့်လျော်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူကအကောင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသူကိုဘာသာရပ်များအနေဖြင့်တစ်ဦးကျရှုံး-လုံခြုံယန္တရားခဲ့ဆုံးနဲ့မေးခွန်းများကိုလျော့နည်းဘက်လိုက်မှုအဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အတင်းအဓမ္မရွေးချယ်မှု technique ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒီမေးခွန်းလွှာများကန့်သတ်သည့်ဘာသာရပ်များအပေါ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ပျင်းသွေးဆောင်ရသောမေးခွန်းများကို, ၎င်း၏အရေအတွက်ကိုပါဝင်သည်။ ညစ်ညမ်း-related ဝေါဟာရများ၏အသိပညာနားလည်မှုအတွက်အရေးကြီးခဲ့ပါတယ်နှင့်မေးခွန်းများကိုတုံ့ပြန်အဖြစ်ထို့အပြင်လူငယ်ညစ်ညမ်းစွဲပြင်ပကတခြားအခြေအနေတွင်၎င်း၏အသုံးပြုမှု, အသုံးအနှုန်းချိန်ညှိလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
2.3 ။ မှတ်ဉာဏ်အကဲဖြတ်ခြင်း
သင်တန်းသားများကို '' မှတ်ဥာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကဲဖြတ်ရန်ကျနော်တို့အာရုံ-နှုတ်မှတ်ဉာဏ်အဘို့အ Ray အာရုံနှုတ်ဖြင့်သင်ယူစမ်းသပ် (RAVLT) ၏ A6 နှင့် A7 ရမှတ်သုံးပြန်လည်သိမ်းဆည်းနှင့်အတူ / အမြင်အာရုံမှတ်ဉာဏ်အဘို့အ Ray-Osterrieth Complex ပုံစမ်းသပ်ခြင်း (ROCFT) ၏ရမှတ်နှောင့်နှေး။ အာရုံစူးစိုက်မှုကျယ်ပြန့်မှတ်ဉာဏ် [18, 19] အလုပ်လုပ်အတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးအဖြစ်ထို့အပြင်, ငါတို့သည်လည်းအားလုံးစမ်းသပ်မှုသက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ [20-23] မှာဖော်ပြထားတဲ့စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်စမ်းသပ်ခြင်း (TMT) A နှင့် B တွင် Making Trail အကဲဖြတ်။
2.4 ။ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ရယူရန်
ငါတို့ရှိသမျှသည်စမ်းသပ်မှုများတွင်ညစ်ညမ်းမဆိုပုံစံကြှနျုပျတို့၏ဘာသာရပ်များမြင်အောင်မပြခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါလေ့လာမှုဆေးပညာ Universitas အင်ဒိုနီးရှား (ရှင်းလင်းခြင်းအမှတ် 1155 / UN2.F1 / ETIK / 2017) ၏ဌာနကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသန Ethical ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
2.5 ။ စာရင်းအင်းအားသုံးသပ်ခြင်း
အဆိုပါမန်း-Whitney စမ်းသပ်စွဲနှင့် nonaddiction အုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုတွင်လိင်လူမျိုးကွဲများအကြားမှတ်ဉာဏ်အကဲဖြတ်ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှုအပေါ်ယူဆခဲ့သည်။ အားလုံးစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကို Windows 22 အပေါ်SPSS®ဗားရှင်း7သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
3.1 ။ လူဦးရေအချိုးအစားမှာ Data
ကျနော်တို့ 30 ဘာသာရပ်များစာရင်းသွင်း (စွဲအုပ်စုတစ်စု vs nonaddiction အုပ်စုတစ်စု: 13.27 ± 1.03 y က vs ယုတ်အသက်အရွယ် = 13.80 ± 1.26) (စားပွဲတင် 1) ။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ) အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက် (ခဲ့ကြသည်။ စားပွဲတင် 1: လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်စမ်းသပ်မှုရမှတ်နှိုင်းယှဉ်။
3.2 ။ မှတ်ဉာဏ်အကဲဖြတ်ရလဒ်များ
A6 (MD = -1.80,) (စားပွဲတင် 7, ပုံ 1.60) တွင်ခြားနားချက်၏, အဲဒီမှာ RAVLT A1 အတွက်စွဲလမ်းနှင့် nonaddiction အုပ်စုများအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (MD = -1) စိတ်သဘောထားနှင့်အတူခဲ့ပေမယ့်ကစာရင်းအင်းသိသာဘူး။ လိင်လူမျိုးကွဲအတွက်ထပ်မံနှိုင်းယှဉ်ဆိတ်ကွယ်ရာအထီးဘာသာရပ်များ (MD = -7) ရက်နေ့တွင် RAVLT A2.30 အတွက်စိတ်သဘောထားကနေလိင်-တိကျတဲ့ခြားနားချက်မပြခဲ့ပါဘူး။ ROCFT, TMT-တစ်ဦးနှင့် TMT-B ကိုစမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုမသိသိသာသာခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်။ ပုံ 1: အုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ် RAVLT A6 နှင့် A7 ၏ထောင့်ကွက်ကွက်။ စာရင်းအင်းများသိသိသာသာ () ။
ဒီလေ့လာမှုအထူးအထူးသဖြင့် Juvenile အတွက်ညစ်ညမ်းစွဲအတွက်မှတ်ဉာဏ် function ကိုအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့, ငါတို့တိုက်ရိုက်ယခင်လေ့လာမှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်းရှိကြ၏။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့နှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်-based စှဲအများအပြားကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ  ကိုရှာဖွေသည်အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. ထံမှရပ်တဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်သကဲ့သို့, အဓိကအားဖြင့်အင်တာနက်စွဲအခြားဆက်စပ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူသွယ်ဝိုက်ရလဒ်ဆွေးနွေးရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ယု et al က EEG လေ့လာမှု။ အင်တာနက်စွဲဘာသာရပ်များအပေါ်သိသိသာသာ P300 အတွက်တိုးလာ / နှောင့်နှေးအောင်းနေချိန်နှင့်အတူလွှဲခွင်လျော့နည်းသွားထားကြောင်းကိုတွေ့လျှော့ချမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်  အကြံပြုခြင်း, nonaddiction ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ amplitudes ။ P300 တစ်လှုံ့ဆော်မှု memory နဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု [300, 27] နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့အဆိုပြုထားသောမသေချာမရေရာတဲ့ဘွဲ့  ဖြေရှင်းပြီးနောက်± 29 ms မှာဖြစ်ပေါ် EEG တစ်ဦးအပြုသဘော Peak လှိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယု et al ။ ရဲ့လေ့လာမှုနှင့်ကိုက်ညီအမျိုးမျိုးကိုအခြားလေ့လာမှုများ 28 [ဤကဲ့သို့သောအရက်  ဆေးခြောက်  ကင်း [31, 32] နှင့် opioid / ဘိန်းဖြူအဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲအပေါ်အလားတူရလာဒ်များ [33, 33] တွေ့ -35] ။ ထို့အပြင် P300 မူမမှန်လည်း antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူ [30, 36] နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ယခင်လေ့လာမှုများပစ္စည်းဥစ္စာစွဲထဲမှာနိမ့်အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ် [5, 15, 37-39] တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်ရောဂါဗေဒမဟုတ်လောင်းကစားဝိုင်း [5, 15] ။ Nie et al ။ ဆက်စပ်အင်တာနက်ကိုပစ္စည်းများနှင့်အတူကွုံရသောအခါနှုတ်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အင်တာနက်ကိုစွဲများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလေ့လာ; လေ့လာမှု 2-ကျောတာဝန်အတွက်ဘာသာရပ်များ '' မှတ်ဥာဏ် function ကိုပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုထက်အနည်းငယ်ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသူတို့  အင်တာနက်-သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အင်တာနက်-related ပစ္စည်းအပေါ်ပိုကောင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ Laier et al ။ အထူးသညစ်ညမ်း contents တွေကိုအသုံးပြုခဲ့နှင့်ဤလေ့လာမှုအထူးစွဲအကဲဖြတ်ရန်မပြုခဲ့ပေမယ့်သိသိသာသာ  လတ် 40-ပြန် task ထဲမှာအမြင်အာရုံအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ RAVLT, Nie et al ။ ရဲ့လေ့လာမှုမှာအကဲဖြတ်ခဲ့ရာအလားတူနှုတ်မှတ်ဉာဏ်, တိုင်းတာပြီးကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုဒီလေ့လာမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်အတွက်အလားတူတွေ့ရှိခဲ့လျှော့ချရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့ကြသည်။
(လိင်လူမျိုးကွဲအပေါ်အခြေခံပြီး) ထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမျိုးသမီးနှင့်အထီးလူမျိုးကွဲများအကြားမျှလိင်-တိကျတဲ့ခြားနားချက်ပြသခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အစဉ်အလာညစ်ညမ်း [2, 41, 42] အမျိုးသမီးထက်ယောက်ျားကပိုထိခိုက်စေသောလူသိများခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း, ဒီမှာကျွန်တော်ချို့ယွင်းမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်နှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲ၏အသင်းအဖွဲ့အပေါ်လိင်တန်းတူညီမျှမှုကိုပေးအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်, ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူပြဿနာများအထီးမှသီးသန့်မပေးဖြစ်ကြပြီးအမျိုးသမီးကိုလည်းပြသခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲကုသသင့်ကြောင်း။
မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည် [18, 19] များအတွက်ဖွငျ့အချက်ဖြစ်ခြင်းအာရုံစူးစိုက်မှုရှိနေသော်လည်း, ငါတို့ညစ်ညမ်းစွဲထဲမှာချို့ယွင်းမှတ်ဥာဏ်အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာနှင့်ပတ်သက်သောမခံခဲ့ရကြောင်းအကြံပြု, နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအကြားအာရုံကိုစမ်းသပ်ရလဒ်များကိုမသိသိသာသာကွာခြားချက်ရှိကွောငျးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများဒီချွတ်ယွင်းများ၏အကြောင်းရင်းနားလည်ရန်မျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။
ထို့အပြင်၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိခဲ့သောဤလေ့လာမှု၏န့်အသတ်, လူငယ်ဘာသာရပ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏အစောဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးအဆင့်ရှေ့ဆောင်ညစ်ညမ်းစွဲလေ့လာမှုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်နေသော်လည်းလူငယ်ဦးနှောက်နေဆဲကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ  ဤသို့နောက်ခံဦးနှောက်ချို့ယွင်း  လျော်ကြေးပေးမယ်နေကြသည်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုရန်အတွက်တစ်ဘုံချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်ထို့အပွငျ, က Juvenile မှညစ်ညမ်းဖေါ်ပြခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာကံမကောင်းရှုံးသောအခါခဲ့သိက္ခာမဲ့စဉ်းစားသည်။ ဒုတိယအကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု, cross-section ဒီဇိုင်းဖြစ်ခြင်း, နိမ့်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်များနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲအကြားအကြောင်းရင်း-and effect ကိုကြားဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ (RAVLT A3 ကကိုယ်စားပြု) အာရုံချက်ချင်းမှတ်ဉာဏ်, အာရုံနှောင့်နှေးမှတ်ဉာဏ် (A6), နှင့်အမြင်အာရုံနှောင့်နှေးမှတ်ဉာဏ် (ROCFT: စဉ်းစားရန်နောက်ထပ်အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကိုနှိုင်းယှဉ်သာ7အမှန်တကယ် variable တွေကိုခဲ့သကဲ့သို့ငါတို့သည်မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့ငါတို့ရလဒ်များကိုပြင်ပေးဘူးဆိုတာပါပဲ ကျွန်တော်တစ်ဦးမျိုးစုံ-နှိုင်းယှဉ်မှားယွင်းသော-ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအမှားဖြစ်ပေါ်စေရန်အဖြစ်လည်းအနည်းငယ်စဉ်းစားသောနှောင့်နှေး) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်အားလုံးပြီးစီးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြသဒေတာပူးတွဲခဲ့ကြသည်: TMT A နှင့် B အာရုံကိုဖရိုဖရဲထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့စဉ် RAVLT A1-5, A6 နှင့် A7 ဆီသို့လုပ်ငန်းစဉ်၏ရလာဒ်များဖြစ်ကြသည်။
အထူးသဖြင့် longitudinal နှင့် functional ဖြစ်စေပုံရိပ်ဒီဇိုင်းများအပေါ်မှတ်ဉာဏ်, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုး၏အခြားရှုထောင့်အပေါ်ညစ်ညမ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ထပ်မံ neurocognitive လေ့လာမှုများ, ချွတ်ယွင်းများ၏အကြောင်းရင်းနှင့်အတိုင်းအတာအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်သည်။
ညစ်ညမ်းစွဲမသက်ဆိုင်လိင်နှင့်အာရုံစိုက်မှုမှအသင်းအဖွဲ့ခြင်းမရှိဘဲ, Juvenile အတွက်ချို့ယွင်းမကြာသေးမီနှုတ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
ဤလုပ်ငန်းတစ်ခုအစောပိုင်းကဗားရှင်းစိတ္တဇနှင့်အင်ဒိုနီးရှားဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရေးနှင့်သုတေသနအင်စတီကျု (IMERI အပေါ် ICE) ရက်နေ့တွင်အဆိုပါ 3rd အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲမှာပိုစတာ, 2018 အဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Pukovisa Prawiroharjo နှင့် Hainah Ellydar အညီအမျှဒီလေ့လာမှုလှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုကအမျိုးသမီးများလုပ်ပိုင်ခွင့်၏အင်ဒိုနီးရှားန်ကြီးဌာနနှင့်ကလေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (အစိုးရ-sponsored) ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ စာရေးသူဤစာတမ်းတွင်၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုအလက်ဇန္ Chessa, ကီဗင် Widjaja နှင့် NIA Soewardi ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
လိင်အားဖြင့် subgrouped nonaddiction နှင့်စွဲအုပ်စုများအကြား memory နဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစမ်းသပ်ရမှတ်၏နှိုင်းယှဉ်။ (နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်းများ)
RZ စတိန်းနှင့်အဲန်ဒီ Volkow "စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏အလုပ်မဖြစ်: တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု neuroimaging" သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, vol Reviews ။ 12 မရှိ။ 11, စစ။ 652-669, 2011 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
T. မေတ္တာတော်, C. Laier, အမ်အမှတ်တံဆိပ်, အယ်လ် Hatch နှင့် R. Hajela "ဟုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ၏အာရုံကြောသိပ္ပံ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့် update ကို" အပြုအမူသိပ္ပံ, vol ။5မရှိ။ 3, စစ။ 388-433, 2015 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
American Psychiatric Association, Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ, အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး, ဝါရှင်တန်ဒီစီ, အမေရိကန်, 5th ထုတ်ဝေ, 2013 ။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအင်ဒိုနီးရှားကလေးများထိတွေ့ခြင်းအပေါ် Yayasan Kita ဒန် Buah Hati, ဒေတာများ, Yayasan Kita ဒန် Buah Hati, ဂျကာတာ, အင်ဒိုနီးရှား, 2016 ။
N. Albein-Urios, JM Martinez-ဇာလ, အို။ ဝီလိုဇာနို, အယ်လ် Clark ကများနှင့်အေ Verdejo-Garcia, "ကိုကင်းစွဲခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Impulse နှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏နှိုင်းယှဉ်: ကင်း-သွေးဆောင် neurotoxicity များအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ," မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို, vol ။ 126 မရှိ။ 1-2, စစ။ 1-6, 2012 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အယ်လ် Moccia, အမ် Pettorruso, အက်ဖ်ဒီ Crescenzo et al ။ "လောင်းကစားရောဂါအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု: fMRI လေ့လာမှုတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်," Neuroscience & Biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, vol ။ ထုတ်ဝေသူမှာ 78, စစ။ 104-116, 2017. ကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus တွင်ကြည့်ရန်
အာရုံကြောသိပ္ပံပေးစာ, vol: G. အ Dong, အိပ်ချ် Zhou နှင့် X တို့မှာ Zhao နှင့် "ဟုအရောင်-စကားလုံး Stroop တာဝန်ကနေသက်သေအထောက်အထားအမျိုးသားကအင်တာနက်စွဲချို့ယွင်းအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုပြသ" ။ 499 မရှိ။ 2, စစ။ 114-118, 2011 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
G. အ Dong, EE DeVito, X တို့မှာဒူနှင့် Z. Cui, " '' အင်တာနက်စွဲရောဂါ '၌ချို့တဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှု: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု," စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန: Neuroimaging, vol ။ 203 မရှိ။ 2-3, စစ။ 153-158, 2012 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အိပ်ချ်ယု, X တို့မှာ Zhao နှင့် N. လီ, အမ်ဝမ်နှင့် P. Zhou, သဘာဝသိပ္ပံ, vol အတွက်တိုးတက်မှု "EEG ၏အချိန်-အကြိမ်ရေဝိသေသပေါ်တွင်အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Effect" ။ 19 မရှိ။ 10, စစ။ 1383-1387, 2009 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
ဂျေ Nie, ဒဗလျူ Zhang က, ဂျေချန်နှင့်ဒဗလျူလီ, "အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်က-related စကားကိုတုန့်ပြန်ချို့တဲ့တားစီးနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်: အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်" စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန vol ။ 236, စစ။ 28-34, 2016 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
PW Kalivas နှင့်အဲန်ဒီ Volkow "စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: တစ်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုရောဂါဗေဒ," စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, vol ။ 162 မရှိ။ 8, စစ။ 1403-1413, 2005 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အက်စ် Spiga, အေ Lintas နှင့်အမ်ဒိုင်ယာနာ, "စွဲလမ်းမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ် functions များ," သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ, vol ၏ရာဇဝင်။ 1139 မရှိ။ 1, စစ။ 299-306, 2008 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အယ်လ်ဖတ်တ်နှင့်အမ်ဒီယာနာ၊ “ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း - ကုသမှုလိုအပ်နေသောအကျိုးသက်ရောက်မှု - သိမြင်မှုဆိုင်ရာရောဂါ” Neuroscience & Biobehavioral Reviews, vol ။ ထုတ်ဝေသူမှာ 65, စစ။ 341-361, 2016. ကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
A.-P. le Berre, R. Fama နှင့် EV Sullivan က "အလုပ်အမှုဆောင် functions များ, မှတ်ဉာဏ်နှင့်လူမှုရေးသိမြင်လိုငွေပြမှုနှင့်နာတာရှည်အရက်ထဲမှာပြန်လည်နာလန်ထူ: အနာဂတ်သုတေသနအကြောင်းကြားရန်အရေးပါသောသုံးသပ်ချက်ကို" အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန, vol ။ 41 မရှိ။ 8, စစ။ 1432-1443, 2017 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
W.-S. yan, Y.-H. လီ, အယ်လ် Xiao, N. Zhu, အေ Bechara နှင့် N. Sui ကို "စွဲလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ် memory နဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေဆုံးဖြတ်ချက်ချ: ဘိန်းဖြူစွဲ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားတစ်ဦး neurocognitive နှိုင်းယှဉ်," မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို, vol ။ 134, စစ။ 194-200, 2014 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
LP Spear“ Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Vol ။ ၂၄ မဟုတ်ဘူး။ ထုတ်ဝေသူမှကြည့်ပါ။ 24, pp ။ 4-417, 463. Google Scholar တွင်ကြည့်ရန်၊ Scopus တွင်ကြည့်ရန်
အယ်လ် Steinberg, "မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်သိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေဖွံ့ဖြိုးရေး," သိမှုသိပ္ပံ, vol အတွက် Trends ။9မရှိ။ 2, စစ။ 69-74, 2005 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
N. Unsworth, K. ဖူကူ, အီး Awh နှင့် ek Vogel "အလုပ်လုပ် memory နဲ့အရည်ထောက်လှမ်းရေး: စွမ်းရည်, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အလယ်တန်းမှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်ရယူခြင်း," သိမှုစိတ်ပညာ, vol ။ 71, စစ။ 1-26, 2014 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
N. Cowan "ဟု The မှော်နက်နဲသောအရာလေး: ဘယ်လိုကန့်သတ်ထားမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်အလုပ်လုပ်ကိုင်, ဘာကွောငျ့လဲဖြစ်ပါတယ်?" စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံ, vol အတွက်လက်ရှိဦးတည်။ 19 မရှိ။ 1, စစ။ 51-57, 2010 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အီး Strauss, EMS Sherman နှင့် O. Spreen, Neuropsychological စမ်းသပ်မှု၏အဖြေ Compendium: အုပ်ချုပ်ရေး, စံနှုန်းများနှင့် Commentary, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, အောက်စ်ဖို့, ဗြိတိန်, တတိယစာစောင်, 2006 ။
PA ဆိုပြီး Osterrieth တစ် Complex ပုံကူးယူခြင်း၏စမ်းသပ်မှု: အမြင်နှင့်မှတ်ဉာဏ်, vol ၏လေ့လာမှုတစ်ခုဖြည့်ပံ့ပိုး။ 30, American Psychiatric Association Philadelphia, PA, USA, 1944 ။
A. အ Rey, စိတ်ပညာအတွက်လက်တွေ့စာမေးပွဲ, Presse တက္ကသိုလ်နှင့်ကျောင်းများက de ပြင်သစ်, ပဲရစ်, ပြင်သစ်, 1964 ။
အမေရိကန်ကြည်းတပ်တစ်ဦးချင်းစမ်းသပ်ခြင်းဘက်ထရီ, လမ်းညွှန်များနှင့်အမှတ်ပေး, စစ်ဦးစီးဌာန, တွဲဖက်အထွေထွေရုံး, ဝါရှင်တန်ဒီစီ, အမေရိကန်, 1944 ၏လက်စွဲ။
ဂျေ Schiebener, C. Laier နှင့်အမ်အမှတ်တံဆိပ်, "ညစ်ညမ်းအတူ flyer ပဲရှိသေး? တစ်ဦး multitasking ကိုအခြေအနေမှာဘာတွေကိုသုံးရင်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှု "အပြုအမူစွဲ, vol ၏ဂျာနယ်ကျဘာစွဲလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။4မရှိ။ 1, စစ။ 14-21, 2015 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အက်ဖ်ဃ။ Boisgueheneuc, R. Levy, အီး Volle et al, "လူမှာဘယ်ဘက်သာလွန်တိုကျရိုကျ gyrus ၏ Functions များ: တစ်တွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှု," ။ ဦးနှောက်, vol ။ 129 မရှိ။ 12, စစ။ 3315-3328, 2006 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
G.-J. Meerkerk၊ RJJMVD Eijnden နှင့် HFL Garretsen၊ “ အင်တာနက်ကိုအတင်းအဓမ္မအသုံးပြုခြင်းကိုခန့်မှန်းခြင်း - အားလုံးသည်လိင်နှင့်ပတ်သက်သည်!” CyberPsychology & Behavior, vol ။ ၉ ။ ထုတ်ဝေသူမှကြည့်ပါ ၁ ။ စစ။ ၉၅–၁၀၃၊ ၂၀၀၆ ။ Google Scholar တွင်ကြည့်ရန်· Scopus တွင်ကြည့်ရန်
အက်စ် Sutton, P. Tueting, ဂျေ Zubin နှင့် ER ယောဟန်သည် "သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အာရုံခံအလားအလာ evoked" သိပ္ပံ, vol ။ 155 မရှိ။ 3768, စစ။ 1436-1439, 1967 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
ဂျေ Polich "P300 အသစ်ပြောင်းခြင်း: တစ်ခု P3a နှင့် P3b ၏ Integrated သီအိုရီ" လက်တွေ့ Neurophysiology, vol ။ 118 မရှိ။ 10, စစ။ 2128-2148, 2007 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အက်စ် Campanella, O. Pogarell နှင့် N. Boutros, "ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက် Event-related အလားအလာ," လက်တွေ့ EEG နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ, vol ။ 45 မရှိ။ 2, စစ။ 67-76, 2014 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အယ်လ်ကော်စတာ, အယ်လ် Bauer ကအက်စ် Kuperman et al ။ , "တိုကျရိုကျ P300 လျှော့, အရက်မှီခိုနှင့် antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ," ဟားဗတ်, vol ။ 47 မရှိ။ 12, စစ။ 1064-1071, 2000 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
EL Theunissen, gf Kauert, SW Toennes et al ။ , Psychopharmacology, vol "THC မူးယစ်, စဉ်အတွင်းရံဖန်ရံခါနှင့်မိုးသည်းထန်စွာဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများ၏ Neurophysiological လုပ်ငန်းဆောင်တာ" ။ 220 မရှိ။ 2, စစ။ 341-350, 2012 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အီး Sokhadze, C. Stewart က, အမ် Hollifield နှင့်အေ Tasman "Event-related အလားအလာကင်းစွဲနေတဲ့မြန်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်အလုပ်အမှုဆောင်အလုပ်မဖြစ်၏လေ့လာမှု," Neurotherapy ၏ဂျာနယ်, vol ။ 12 မရှိ။ 4, စစ။ 185-204, 2008 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
LO Bauer "CNS ကိုကင်း, ကိုကင်းနှင့်အရက်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူ, ဒါမှမဟုတ် opioid မှီခို: တစ် P300 လေ့လာမှု," လက်တွေ့ Neurophysiology, vol ။ 112 မရှိ။ 8, စစ။ 1508-1515, 2001 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
ခယန်, အက်စ်ယန်, အယ်လ် Zhao နှင့်အယ်လ်ယဉ်, X တို့မှာလျူနှင့်အက်စ်တစ်ခုက "ဘိန်းဖြူစွဲအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတားစီးတဲ့ Go ကို / Nogo တာဝန်အတွက် Event-related အလားအလာ," တရုတ်စီးရီးကို C အတွက်သိပ္ပံ : ဘဝကသိပ္ပံ, vol ။ 52 မရှိ။ 8, စစ။ 780-788, 2009 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
CC ကို Papageorgiou, အိုဝါ Liappas, EM Ventouras et al, "ဘိန်းဖြူစွဲအတွက်ရေရှည် abstinence syndrome ရောဂါ: အတိုမှတ်ဉာဏ်တာဝန်နှင့်အတူဆက်နွယ် P300 ပွောငျးလဲ၏ညွှန်းကိန်း" ။ Neuro-Psychopharmacology နှင့်ဟားဗတ်, vol အတွက်တိုးတက်မှု။ 28 မရှိ။ 7, စစ။ 1109-1115, 2004 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
AN ယုတ္တု PR စနစ်ဖင်လန်နှင့် je Steinmetz "P300, disinhibited ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စောစော-စတင်ခြင်းအရက်ပြဿနာများ" အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန, vol ။ 25 မရှိ။ 10, စစ။ 1457-1466, 2001 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
MJ မော်ဂန်, ecstasy "(MDMA)," Psychopharmacology, vol "၏အပန်းဖြေအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှု" ။ 141 မရှိ။ 1, စစ။ 30-36, 1999 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
A. အ Bechara နှင့် EM မာတင်, Neuropsychology, vol "ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုအလုပ်လုပ်မှဆက်စပ်အောင်ချို့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်" ။ 18 မရှိ။ 1, စစ။ 152-162, 2004 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
O. ဂျော့ခ်ျ, CD ကို Mandyam, အက်စ် Wee နှင့် gf Koob, Neuropsychopharmacology, vol "ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြာရှည် prefrontal Cortex-မှီခိုအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းထုတ်လုပ်မှတိုးချဲ့ access ကို" ။ 33 မရှိ။ 10, စစ။ 2474-2482, 2008 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
C. Laier, လက်ဗွေ Schulte နှင့်အမ်အမှတ်တံဆိပ်, လိင်သုတေသန, vol ၏ဂျာနယ် "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်, နှောင့်ယှက်" ။ 50 မရှိ။ 7, စစ။ 642-652, 2013 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
စိတ်ရောဂါကုသမှု, vol အတွက်ဒဗလျူ Aviv, R. Zolek, အေ Babkin, K. Cohen ကိုနှင့်အမ် Lejoyeux "အချက်များကျဘာ၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအသုံးပြုသူများသည်အကြားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းအတွက်ဘာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အခက်အခဲများခန့်မှန်း," Frontiers ။ 6, စစ။ 1-8, 2015 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
ဂျေပေတရုနှင့် pm တွင် Valkenburg "ဟုအင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' ထိတွေ့မှု," ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန, vol ။ 33 မရှိ။ 2, စစ။ 178-204, 2006 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
BJ Casey, RM ဂျုံးစ်နှင့် TA Hare "ဟု The ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်" သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ, vol ၏ရာဇဝင်။ 1124 မရှိ။ 1, စစ။ 111-126, 2008 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အစ္စမေးလ်, အေ Fatemi နှင့်သင်္ဘော MV Johnston "နှောက် plasticity: ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်အတွက်အခွင့်အလမ်းပြတင်းပေါက်များ," ကလေး Neurology, vol ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 21 မရှိ။ 1, စစ။ 23-48, 2017 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်